KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Xaalada Isbitalka Baladweyne -Warbixin
Wednesday 20 February 2013 14:18
Xaalada Isbitalka Baladweyne -Warbixin
Muqdisho (KON) Isbitalka guud ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobalka Hiiraan haatan waxaa ku jira bukaano badan kuwaasi oo qaarkood ay yihiin caruur la il daran dhafaqo daro.
Bukaanada ku jira Isbitalka ayaa waxay isugu jiraan kuwo laga keenay xaafadaha magaalada Baladweyne halka kuwa kalana laga keenay deegaanada fog gog sida degmooyinka kale ee gobalkaan.
Lixdii sano ee ugu danbeeyay waxaa isbitalkaan gacanta ku haayay Hay’ada MFS Switzerland waxaana ay ka baxday 31-bishii December ee sanadkii la soo dhaafay, waxaana hay’adaasi ay kaga hadlay daawo yar taasi oo haatan ah mid gabaabsi ah.
Dr. Axmed Maxamuud Qaliif oo ah maamulaha Isbitalka guud ee magaalada Baladweyn ayaan waxaan wax ka waydiiyay xaalada isbitalka, waxaana uu sheegay in isbitalka haatan ay ka jirto daawo yari daran.
Wixii ka danbeeyay markii hay’adaasi ay ka baxday magaalada Baladweyne ayaa waxaa howlaha isbitalka waday dadka deegaanka iyo waliba ganacsatada.
Sidoo kalana waxaa isbitalka caawiya ciidamada midowga Afrika ee jooga magaalada sida uu noo sheegay maamulaha isbitalka guud ee magaalada Baladweyne.
Cabdi Waabari Gadi Oo ah Dr. ka tirsan ciidamada AMISOM ee Jabuuti ka socda ee Baladweyne jooga ayaa wuxuu sheegay caafinaad yar oo la siiso isbitalk inaysan waxba ku taranayn.
Isbitalka Baladweyne ayaa waxaa ku tiirsan dhamaanba shacabka gobalka Hiiraan iyo waliba qaar ka mid ah dadka degan gobalada dariska la ah gobalkaan ku yaala bartamaha Soomaaliya.